Iindaba -Yintoni ikhawuntari? Intsingiselo kunye nokusetyenziswa kwekhawuntala
Bala yenye yezona zinto zilula ezisisiseko zokusebenza. Ikhawuntari yisekethe yokucinga ephumeza lo msebenzi. Ikhawuntari ubukhulu becala kukubetha kwenkqubo yedijithali. Inani libalwa ukuqonda imisebenzi yokulinganisa, ukubala kunye nolawulo. Kwangelo xesha, kukho umsebenzi wokwahlula rhoqo. Ikhawuntara yenziwe yunithi yokubala esisiseko kunye namasango athile olawulo. Iyunithi yokubala yenziwe ngothotho lwezinto ezibangela imisebenzi yokugcina ulwazi. Ezi zinto zibangela kubandakanya ukubangela i-RS, i-T flip-flops, i-D flip-flops, kunye ne-JK ezibangela ..
Izixhobo zokubala zisetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zedijithali, ezinje ngokubala idilesi yemiyalelo kumlawuli wekhompyuter, ukuze ulandele ngokulandelelana imiyalelo, ekusebenzeni Ukuphindaphinda kunye nokwahlula imisebenzi, inani lokongezwa kunye nokukhupha kuyarekhodwa, kwaye ukubala kwe-pulses kwenziwa kwisixhobo sedijithali.
Ikhawuntari inokusetyenziselwa ukubonisa imeko yokusebenza kwemveliso. Ngokubanzi, isetyenziselwa ukubonisa ukuba zingaphi iikopi zemveliso ezigqityiweyo. Esona salathisi siphambili linani leebits kwi-counter. Ngokwesiqhelo kukho ii-5 kunye ne-6 bits. Ngokucacileyo, ikhawuntari enamanani ama-5 inokuboniswa ukuya kuthi ga kwi-99999, kwaye ubuninzi bamanani ayi-6 bunokuboniswa kwi-999999.
1. Ukuba i-trigger ekhawuntareni ityibilike ngaxeshanye, ikhawuntara inokwahlulwa-hlulwa ibe sisixhobo esingqinelanayo kunye ne-asynchronous counter.
2. Ukuba inani liyonyuswa okanye liyancipha ngokwenkqubo yokubala, ikhawuntara inokwahlulwa-hlulwa yikhawuntari yokongeza, ikhawuntari yokuthabatha kunye nekhawuntara ebuyiswayo. Ukongezwa sisixhobo sokudibanisa, kwaye ikhawuntari eyehlayo sisixhobo sokuthabatha. Ukwanda okanye ukuncipha kubizwa njengekhawuntari eguqukayo.
Ukongeza, kukho iindidi ezininzi ezahlukeneyo, kodwa eyona ixhaphakileyo luluhlu lokuqala, kuba olu luhlu lunokwenza abantu bathi krwaqu, bazi ukuba yintoni ebangela le counter ukuze umyili akwazi ukuyila isekethe.
Ukongeza, ikhawuntari ihlala yahlulwe yangokubalanayo yokubala, zokubala, njl